देवकोटाजीसँग सुतेको रात | फणीन्द्रराज खेताला
नगरे घमण्ड कहिल्यै मर्नु छ हामीलाई ।"
-तीर्थ माधव देवकोटा
वि.सं. १९६६ साल कात्तिक महिना महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म महिना हो । सरस�" />
देवकोटाजीसँग सुतेको रात
संस्मरण/स्‍मृति फणीन्द्रराज खेताला December 2, 2009, 6:33 am
"घनघोर दुःख संसार जान भाइ
काठमाडौँ डिल्लीबजार धोबीधाराका पण्डित तीलमाधव देवकोटाको घरमा एक बालकले जन्म लिए । ती बालकलाई जन्म दिने महिला थिइन् अमरराज्य लक्ष्मीदेवी । लक्ष्मी पूजाको पावन पर्वमा जन्मिएका आˆना बालक छोराको नाम पिताले लक्ष्मीप्रसाद राखे तर लक्ष्मी पूजाको दिन जन्मिएका भए पनि बालक त सम्बन्धका वरद पुत्र भएर पो जन्मिएका रहेछन् तर पनि ज्योतिषहरूको धूलौटे विचारमा बालक 'तीर्थ माधव' बने । यसरी लक्ष्मी पूजाको दिन जन्मिएका तीलमाधव देवकोटाका साइँला छोरा त्रिवेणीका सङ्गम बने । यो देवकोटा परिवार शिष्ट परिवार थियो । त्यसैले बालक लक्ष्मीप्रसाद हुने बिरुवाको चिल्लोपात भने्जस्तै दस वर्षका लक्ष्मीप्रसादले केही आदर्श, केही आध्यात्मिक मान दर्शाएर जुन एक श्लोक लेखेका थिए त्यो देखेर पिता निकै प्रभावित भएका थिए होलान् ।
प्रारम्भिक शिक्षा घरैमा भए पनि उनको अङ्ग्रेजी शिक्षाचाहिँ दर्बार स्कुल, त्रिचन्द्र कलेज हुँदै पटना विश्वविद्यालय बी.ए.बी.एल. मा पुगेर टुङ्गियो । विद्या आर्जन जतिसुकै गरे पनि सर्वसाधारण नेपाली दुनियाँले लिने काम भनेको नोकरी मात्र थियो । नोकरी पाउन चाकरी गर्नुपर्दथ्यो शासक वर्गको । त्यसका लागि पनि भित्र पहुँच हुनुपर्दथ्यो । सुरुमा देवकोटाजीले ट्युसन गर्न थाल्नुभयो । परिवार ठूलो र संयुक्त थियो । उहाँका छ दाजु भाइ छ जना र दिदी बहिनी सात आमा दुई र पिता एक समेत दाजुभाइका परिवारसमेत गर्दा परिवार ठूलै थियो । देवकोटा धोबीधारा सगोलमा बस्दै म करिब तीन महिना उहाँसँग अङ्गे्रजी पढ्न गएको थिएँ तर पछि बिहान त्यहाँ ट्युसन पढेर चाबहिल घर पुगी खाना खाएर दर्बार स्कुल पुग्न मुश्किल पर्ने भएकोले उक्त पढाइ छोडेको थिएँ । त्यसपछि धेरैसम्म उहाँको र मेरो भेट भएन तर त्यसैबेला उहाँले दिएको सुझावअनुसार अङ्ग्रेजीको साथै नेपालीको अध्ययनलाई ध्यान दिएँ । आˆनो कक्षाकै साथीले दिएको मुनामदन लोकलयको कथात्मक वियोगात्मक खण्डकाव्य पढेँ र पाए जति नेपालीका सरल पुस्तक आफैँले सकेसम्म अध्ययन गरे र म लेख्न थालेँ । मेरो पैलो कविता थियो 'पैसा' शीर्षकको तर त्यस कवितामा केही हिन्दीका शब्दहरू घुसि्रएका थिए । त्यस्तै भए तापनि १९९४ सालतिरको गोरखापत्रको कुनै अङ्कमा घुसि्रने मौका पाएको थियो ।
२०१० जस्तो लाग्छ, एक दिन बिहान मेरो घरमा गोविन्द वियोगी आए । उनीले जयवागीश्वरीको एउटा बहालमा पुस्तकालय खोलेका थिए । उनले त्यही पुस्तकालयको आयोजनामा एउटा साहित्य सम्मेलन गर्ने, त्यसका लागि देवकोटाजीकहाँ सल्लाह गर्न जाउ"m न भने । मलाई त्यतिबेला फुर्सतै थियो । उनी र म गयौँ । शनिबारको दिन थियो । उहाँ घरैमा भेट हुनु भो माघ महिना थियो समय त्यस्तै आठ बजेको हुँदो हो । उहाँले अर्थ सङ्कलनको लागि आजै एक दुई ठाउँमा जाऊँ भन्नुभयो । हामी दुई साइकलमा गएका थियौँ । उहाँको घरैमा साइकल रहेछ । सर्वप्रथम हामी शिक्षामन्त्री शारदाशमशेरकहाँ गयौँ । उनले एकै वचनमा पाँच सय दिए । अलि अबेला भएकोले अर्को दिन एक ठाउँमा जाने र सम्मेलन माघको १० या ११ गते गर्ने निश्चय गरी फर्कियौँ । यो माघ ३ गतेको कुरा हो र माघ १० गते गर्ने निधो भएको थियो र त्यसै दिन देवकोटाजीकै सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो । यो सम्मेलन बृहत् नै थियो र यो सम्मेलनमा भारतका राहुल सांकृत्यायनसमेत सम्मिलित भएका थिए ।
देवकोटाजीले कति लेख्नु भो, के के लेख्नु भो त्यो उहाँलाई थाहा छैन वा थिएन र उहाँको परिवारलाई पनि थाहा छैन । उहाँको रचनाले कैयौँ व्यक्ति लाभान्वित भएका थिए वा भए त्यो बयान गर्न सकिन्न । २००४ सालतिरको कुरा हो देवकोटाजी, हृदयचन्द्र सिंह, केदारमान व्यथितहरू मिलेर नेपाली साहित्य परिषद् नामको एउटा साहित्यिक संस्था खोलेको थियो जसले सरस्वती सदनमा तीन दिनसम्म साहित्य सम्मेलन गरेको थियो र 'साहित्य स्रोत' नामको पत्रिका पनि हृदयचन्द्रको सम्पादनमा निकालेको थियो । सम्मेलनका सभापति देवकोटाजी हुनुहुन्थ्यो । मलाई यस्तो लाग्छ कि यो सम्मेलनपश्चात् नै देवकोटाजी बनारस जानुभएको थियो र केही समय उहाँले काङ्ग्रेस मुखपत्र 'राष्ट्र पुकार'को सम्पादन पनि गर्नुभएको थियो । यो कुरा मैले सुनेको थिएँ ।